रुद्राक्षको फुलै झरेपछि कृषक र व्यावसायी चिन्तित — KhabarTweet
रुद्राक्षको फुलै झरेपछि कृषक र व्यावसायी चिन्तित
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, आषाढ २६, २०७७ समय: २१:२७:२५
भोजपुर- भोजपुर, संखुवासभा, धनकुटा लगायतका पुर्वि पहाडका जिल्लाको आम्दानीको मुख्य स्रोत हो रुद्राक्ष। फल टिप्ने सिजन नजिकिदै गर्दा भारत र चाईना मुख्य बजार रहेको रुद्राक्ष व्यावसाय कोरोना भाईरसको कारण लक डाउन र नाका बन्द भएपछि कृषक, व्यावसायीलाई निर्यात गर्न समस्या हुने चिन्ता बढिरहेको छ । अर्कोतिर यस्तो अवस्थामा अधिकांश रुद्राक्षका बोटको फुल बोटमै कुहिएर झरेपछि कृषक तथा व्यावसायीहरुलाई झन चिन्ता थपिएको हो।
रुद्राक्षको फुल फुल्ने समयमा लगातार बर्षा भएपछि यस बर्ष रुद्राक्ष उत्पादनमा ६० प्रतिशत ह्रास आउने रुद्राक्ष ब्यावसायी संघका केन्द्रिय अध्यक्ष मनोज चापागाईंले वताए । घामपानीको कारण कतिपय रुद्राक्षको बोट फुल बिहिन बनेको अध्यक्ष चापागाईँले वताए । चापागाईँले भने ‘निरन्तर केहि दिन पानी परेर घाम लागेपछि फुल कुहिएर झर्छ’, ।
रुद्राक्षको फुल बोटमै कुहिएर झरेपछि रुदाक्षमा करोडौको लगानी गरेका व्यावसायीहरु चिन्तित बनेका छन् । रुद्राक्षको वोट ठेक्का, मल र मल छिट्न प्रयोग गरिने औजारमा मात्र डेढ अर्व वढि लगानी गरेका ब्यावसायीहरु फुल झरेपछि चिन्तित बनेका हुन् । बोटमा फुल नै नरहेपछि फलको आसा सकिएको रुद्राक्ष ब्यावसायीसँघका उपाध्यक्ष उत्तम कट्वालको भनाई छ ।
दुई बर्ष अघिसम्म बोटमा मात्र लगानी गर्दै आएका ब्यवसायीहरुले गत बर्षबाट मल(फर्टिलाईजर) समेत खरिद गरेर प्रयोग गर्न थालेकाछन् । यस क्षेत्रका व्यावसायीहरुले करोडौं रुपैयाँमा खरिद गरेर मल प्रयोग गर्दै गरेको भएतापनि फुल नै झरेपछि कमाउने आश मरेको व्यावसायीहरु वताउँछन् ।
चिन र भारतबाट करोडौं रुपैयाँमा ‘मल’ भनिएको रुद्राक्ष चाईनाको माग अनुसार चिल्लो, चेप्टो पार्ने मल खरिद गरेर बोटमा प्रायः सवैले प्रयोग गरेका छन् । तर फुल नै झरेपछि मलमा गरिएको लगानी पनि बालुवामा पानी सरह भएको रुद्राक्ष व्यावसायी संघका अर्का उपाध्यक्ष अगम सिं राईले बताए ।
रुद्राक्षका पुराना कृषक समान सिं राईको भने यस विषयमा फरक विचार छ । फाल्गुन चैत्रमा फुल फुल्नु अघि असिना परेको कारण फुल झरेको अनुमान छ । सधैंको बर्षमा पनि असिना परेको साल फुल नअडिएको उनको ४० बर्ष अघि देखिको अनुभव सुनाए । उनका अनुसार यस बर्ष अहिले सम्मकै धेरै फुल झरेको वताए । बार्षिक लाखौंको ज्वाला मुखदार विक्रि गर्दै आएका राईले यस बर्ष राम्रो फल्ने रुखमा फुलनै नअडिएपछि फलको पनि आश मरेको चिन्ता व्यक्त गरे ।
मल(फर्टिलाईजर)ले फुल झारेको आशंका
शुरु शुरुमा रुद्राक्षको फुल मल प्रयोगको मात्रा नमिलेर झरेको व्यावसायीलाई रुख ठेक्का दिएका कतिपय कृषकले आरोप लगाएकाछन् । गत बर्षसम्म फुल नझर्ने रुखको यस बर्ष फुल झरेपछि कृषकहरुले यस्तो आशंका गरेका हुन् । पछिल्लो समयमा मल प्रयोग गरेको र नगरेको सवै किशिमका रुखको फुल झरेपछि बर्षातकै कारण फुल झरेको ठहरिएको व्यावसायी र कृषकहरुले वताए । ‘
के हो मल ( फर्टिलाईजर) ?
एक दशक अघिको हाराहारि देखि चाईनामा रुद्राक्षको निर्यात हुन थाल्यो । चाईनामा विशेष गरि शुरु शुरुमा ठूला आकारका दानाको माग थियो । पछिल्लो समय ठूलोको साथै चेप्टो र चिल्लो गुणस्तरका रुद्राक्षको माग बढेपछि गत बर्षवाट रुद्राक्षलाई ठूलो चेप्टो र चिल्लो रुद्राक्ष उत्पादन गर्नको लागि मलको प्रयोग गर्न थालिएको रुद्राक्ष व्यावसायीहरु वताउँछन् । धैरै कम रुखमा त्यस्ता दाना फल्ने भएकोले व्यावसायीहरुले कहि बर्ष अघि देखि अनुसन्धान गरेर गतवर्षवाट ठूला, चिल्ला र चेप्टा आकारका दाना फलाउन सफल भएको व्यावसायीहरु वताउँछन् ।
मलमा वोट र फललाई पोषण दिने तत्वहरु रहने विज्ञको भनाई छ । पोटासियम, फस्फोरस, हाईट्रोजन, क्याल्सियम, जिंक, वोरोन, नाईट्रोजन लगायतका रुख र फललाई आवश्यक पर्ने तत्वको सम्मिश्रण हुने कृषि वैज्ञानिक मदन राईले वताए । मलकै कारण मात्र फुल र फल नझर्ने उनको तर्क छ ।
मल (फर्टिलाईजर) ले फुल झरेको होईनः व्यावसायी
रुद्राक्षको वोट व्यावसायीलाई ठेक्कामा दिएका केहि कृषकहरुले रुद्राक्षमा मलको प्रयोग गर्दा फुल झरेको आरोप लगाएका छन् । मलको प्रयोगको अवस्था शुरु शुरु भएकोले व्यावसायीले मलको मात्रा मिलाएर प्रयोग गर्न नजान्दा फुल झरेको उनिहरुको तर्क छ ।
तर रुद्राक्ष व्यावसायीहरुको भने रुद्राक्षमा मलको प्रयोग गरेर फुल नझरेको जिकिर छ । रुद्राक्ष व्यावसायी संघका उपाध्यक्ष अगम सिं राईले मलको प्रयोगले रुद्राक्षको फुल झरेको भन्ने कुरामा सत्यता नरहेको वताए । उनले ‘रुद्राक्षमा फर्टिलाईजरको प्रयोगले फुल झर्ने भए त्यसको प्रयोग नगरेको वोटको फुल कसरी झर्यो ? कृषकलाई प्रति प्रश्न गरे । ’
के भन्छन विज्ञ ?
बर्षात ले फुल झर्यो या अन्य कारण भन्ने प्रश्नमा विज्ञहरुको भने पनि मिश्रित भनाई छ । वनस्पति विभागका पुर्व उपसचिव नरहरि चापागाईँले विरुवालाई चाहिने भन्दा वढि न्युट्रिियन्स भएमा पनि फुल झर्ने वताउँछन् । उनले मलको कारण पनि रुद्राक्षको फुल झरेको हुन सक्ने आशंका गरे । पानी र हावामा हुने व्याक्टेरियाको कारण पनि फुल झर्ने उनको भनाई छ । उनले बर्षात मात्र फुल झर्नुको कारण नभएको बताए ।
यता कृषि वैज्ञानिक मदन राईको भने रुद्राक्षको फुल झर्नुृमा फरक धारणा छ । उनले धेरै बर्षात र सुक्खा दुवै कारण फुल र फल झर्ने वताए । उनले भने “धेरै बर्षात हुँदा मौरी लगायतका किराहरुको क्रियाकलापमा कमि हुन्छ । बर्षातमा मौरीलगायतका किराहरु बाहिर चर्न भन्दा वच्न घारमै वस्न रुचाउँछन, त्यसकारण परागसेचन राम्रोसँग नहुँदा फुल र फल नअडिने हुन्छ ।”
विज्ञहरु रुद्राक्षको फुल र फल झर्ने वास्तविकता पत्ता लगाउन माटो र वातावरणको सम्वन्धित स्थानमै अनुसन्धान आवस्यक रहेको वताउँछन् । यसले रुद्राक्षको कलमी, मल , औजार र कामदारमा गरेको करोडौं लगानी अव अनुसन्धान क्षेत्रमा पनि खर्च गर्नु पर्ने देखिएको छ ।